Chii Chinonzi Cement Paint?
musha / Interior design / Chii Chinonzi Cement Paint?
2021 / 05 / 29 kupatsanuraInterior design 9427 0
Chekutanga Eos Yemukati Dhizaini Mubatanidzwa
Cement pendi, inozivikanwawo seart simenti. Yakave inozivikanwa muindasitiri yekugadzira seye rustic yekushongedza zvinhu zvinorondedzera zvinoreva dhizaini mumutauro wakapusa uye wakachena wezvinhu. Cement pendi inoratidzika zvakajeka uye inotaridzika kunge mashoma. Iyo yepamusoro mhando yerustic runako kana ichienzaniswa neyakaomeswa embossed Wallpaper uye yakajeka latex pendi. Ngatitaurei nezve chii simende pendi nhasi.
Chii chinonzi simende pendi
Hunhu hwependi yesimende
Zvishandiso zvependi yesimende
Matanho ekuvaka uye matanho ekuchengetedza
Mutengo uye mucherechedzo wependi yesimende
Chii chinonzi pendi yesamende?
Cement pendi, rudzi rwe rustic rusvingo kupfeka. Inowanzo danwa kunzi art cement, asi rimwe zita rayo harifanire kunge risingazivikanwe kwauri - yakajeka mvura kongiri.
Izvo zvinhu zvinofarirwa nemugadziri wechiJapan Tadao Ando yakajeka mvura kongiri, chinhu chine zano rewababi-sabi chirevo mune yayo minimalism.
▲ Iye Art Museum
Saka pendi yekongiri yakave sei chigadzirwa chinoputika mukugadzirwa kwemukati?
Kubva pakuvaka kusvika mukati, akateedzana eimalistist, wabi-sabi, uye maindasitiri dhizaini dhizaini mapatani ave akakurumbira. Iyo yepakutanga mameseji uye akasarudzika mameseji ekachena mvura kongiri akaigadzira yakakangwa huku sub-chigadzirwa. Mukugadzirwa kwemukati, vanhu vari kudzingirira iyo yakasikwa mameseji ekrete yakajeka. Saka, maererano nerondedzero inozivikanwa ye "mukati pendi = pendi", yakapihwa zita rekuti "simende pendi". Asi zita iri rinonzwika kwete rakanyanya kugarisana nharaunda, uye kunyange riine ivhu. Ndichiri kufunga iro zita hombe "art cement" inonzwika zvirinani.
b. Musiyano ne latex pendi
Kunyangwe pendi yesimende uye pendi yelatex zviri zvemhando imwechete yezvinhu zvekushongedza, pane mumwe musiyano mune zvakakosha. Imwe simende uye imwe pendi.
Cement pendi chinhu chakasvibirira chakanatswa kubva muresini, ine mamwe macarser akashata, uye iyo yepamusoro dura ichave yakaoma kana ichienzaniswa nerex pendi. Latex pendi ine yakatsetseka uye yakaomesesa magadzirirwo.
c. Musiyano nesimende
Cement pendi simende, asi haigone kutsanangurwa zvakamanikana sesamende. Iine inenge 96% esimende mukuumbwa kwayo, uye iyo yakasara 4% zvigadzirwa. Simende yega haigone kududzira iwo mavara ezvimedu zvependi yesimende uye haigone kushandiswa pakuvaka madziro. Inogona kudonha zvirinyore nekusimudza guruva, uye chete samende yesimendi ndiyo inogona kugadzira iyo yemavara.
Zviratidzo zvependi yesimende
a. Wide akasiyana mafomu
Cement pendi inoshandiswa zvakanyanya mukushongedzwa kwemba uye kushongedzwa neruzhinji. Izvo zvakasiyana neyaimbove latex pendi uye Wallpaper, uye vatengi vanowedzera uye vagadziri vanosarudza kushongedza nzvimbo nependi yesimende, iyo inoratidza zvizere kuti iyo yekushongedza tsika inowanzo kuve yezvakatipoteredza uye yakapusa, iine kusimbisa kwakawanda kune iyo rustic yehunyanzvi hunyanzvi.
b. Yakasimba kushongedza uye yakasarudzika maitiro
Cement pendi ine yakasarudzika sement dhizaini, iyo inokodzera yazvino inozivikanwa minimalist, wabi-sabi uye maindasitiri masitaera. Iyo ine yakasarudzika dhizaini uye yakasarudzika chaiyo yekushongedza mhedzisiro ichienzaniswa nezvimwe zvekushongedza zvinhu.
c. Kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, kushorwa kwemvura uye kushaya banga
Cement pendi ine yakapusa kuumbwa, saka iri girini, mvura-yakavakirwa uye isina kusvibiswa. Iyo yekutanga ine basa rekudzivirira madziro kubva pakupaza, kudurura chalking nekudonhedza dota. Jasi repamusoro rinosaswa kuti riwane kukwikwidza, unyoro uye kushomeka kwevhu. Iyo yakanakira kushandiswa mukugadzirwa kwemukati.
a. Kushongedza imba
Cement pendi iri kushandiswa zvakanyanya uye zvakanyanya mukugadzirwa kwemba. Madziro eimba yaInoue akafukidzwa nesendi pendi, ichigadzira yazvino maindasitiri kunzwa neakasiyana maitiro.
Kwete chete maindasitiri maitiro anoda pendi yesamende, asi wabi-sabi maitiro zvakare anowirirana kwazvo nesamende pendi. Iwo matanda akasvava anowirirana neiyo yepakutanga mameseji epende simende, inova yakakwana mutambo.
b. Kushongedza kweruzhinji
Iyo yakasikwa mameseji anoratidzwa nesamende pendi inokodzera nzvimbo hombe. Iko kusanzwisisika uye kusimba kwekunzwa kuyerera kubva pane izvo zvinhu kunogona kuita kuti nzvimbo yese ive nerakareruka uye runako runako. Mutengo wependi yesimende uri pakati nepakati uye maitiro ekuvaka ari nyore uye anokurumidza, saka inzira inokurumidza uye inoshanda yemamwe mapurani ekushongedza veruzhinji.
a. Matanho ekuvaka
Kuvakwa kwesenti pendi kuri nyore, kubva pakurapa kwekutanga kusvika kune putty dura kusvika kumatanho ekuvaka ependi yesamende. Chekutanga, tinotenderedza iyo alkali inodzivirira sealer primer, chechipiri, tinokwenya pendi yesimende, uye pakupedzisira, tinokungurutsa / kumwaya jasi repamusoro uye kupedzisa!
Kune maviri marudzi esamende yekuvaka pendi maitiro, ayo anoda kutsanangurwa: imwe kupuruzira zvakatsetseka, uye imwe kubatch batch. Kune zvakare maviri marudzi ekutsvaira: imwe ndeye trowel kukwenya uye imwe ndeye batch banga rekutsvaira. Mhedzisiro inogadzirwa neyakagadzirwa yega yega inosiyana, saka unofanirwa kusarudza zvine hungwaru.
▲ Mhedzisiro yekukorobha gorofa ndeyehurefu hwekugadzirwa, uye kuvaka kwacho kuri nyore.
▲ Iwo maratidziro ari pachena uye akasarudzika, uye maitiro ekuvaka akaomesesa, izvo zvinoda mwero wepamusoro kwazvo wehunyanzvi hwemhizha.
Kuti uyananise zvinoitika uye nekumhanyisa mhanyisa, nzira yekuvaka yekukwirisa ne trowel yakawedzerwa. Maitiro akadaro zvakare ane mutengo wakaderera webasa.
Yekutanga chenjedzo yesimende pendi kuvaka ndiko kusarudzwa kwemavara uye magadzirirwo. Kazhinji, vagadziri vanopa mabara emavara kana zvidiki zvidiki zvemuenzaniso kuyedza diki diki kutanga, uye wozosarudza mashandisiro acho.
Imwe poindi ndeye matanho ekuchengetedza. Iwo mwero wekutenderera pamadziro une hukama nekupedzisa, iko kukasira kupera kwekupedzisira kunoitwa zvinonyatso kuoneka maitiro emota. Uye zvinoenderana neakasiyana ekurasa maturusi, matekinoroji, nguva musiyano kudzora, nezvimwe, zvinogona zvakare kugadzira akasiyana emota mhedzisiro.
Mutengo wezvinhu wependi yesimendi unosiyana kubva pa10 yuan / square mita kusvika ku200 yuan / square mita. Mari yekuvaka inoda kuve nemutengo zvinoenderana neyero yemuno oiler. Kazhinji, diatomaceous pasi kuvaka tenzi vanogona kuve nekwanisi yekuvakwa kwesamende pendi.
Cement pendi brand kukurudzira
Jane madhaka, Simu, oikos, kuyangarara Fei Nei, keteni Kai mhepo
Chati chinotevera chinopfupisa: chii chinonzi simende pendi?
Pakapfuura :: Cement Paint, Plaster Line, Marble, Girazi, Dudziro Dzakawanda Dzemazuva Ano Maitiro! Zvadaro: Chii Chinonzi Magnetic Suction Lamp?
2021 / 08 / 15 5627
2021 / 08 / 15 6190
2021 / 08 / 15 5970
2021 / 08 / 14 5700
2021 / 08 / 14 6232
2021 / 08 / 14 5411